Ampiasaina betsaka amin'ny fikolokoloana zavamaniry sy zavamaniry, ity habe 55mm ity dia mora entina sy hadio.
Araka ny efa noheverinao fa ny grinder dia fitaovana ampiasainao hanapotehana ny rongony ho lasa sombin-javatra kely ho an'ny vilia baolina milamina kokoa na amin'ny famonosana ireo taratasy mihorona sy ireo fonosana mahamenatra. Misy fomba maromaro hikosehana rongony raha tsy manana grinder ianao, fa ny hafainganam-pandeha dia manafaingana ny fizotrany ary manolotra tombam-bidy toy ny mpihaza kief.
Ny mpitazona kief dia manondro ny efitrano farany ambany eto ambany amin'ny efijery izay manangona ny kief kristaly matanjaka rehetra nanapotsitra ireo tsimoka amin'ny fizotran'ny fikolokoloana. Azonao atao ny mamoaka ny kief ary manampy azy eo an-tampon'ny vilia, na ampiasao any aoriana hanery ny hash anao na handrahoana sakafo.
Etsy ambonin'ny efijery dia ho hitanao ilay efitrano fikosoham-bary misy nify "na ny lelany izay manao ny asa rehetra. Mikatona amin'io ampahany io ny fonon'ny makarakara, ary matetika ireo makarakara vy dia manana andriamby manampy azy ireo hitandrina tsara rehefa mitoto ianao.
Fomba fampiasana grinder marijuana
Teo aloha: grinder logo manokana
Manaraka: sary famantarana manokana momba ny rongony